नयाँ वर्षको दिन माइत आउँछु भनेकी छोरी दिउँसो झुन्डिएको अवस्थामा फेला ! घटना रहस्यमय !
Homeसमाचारनयाँ वर्षको दिन माइत आउँछु भनेकी छोरी दिउँसो झुन्डिएको अवस्थामा फेला ! घटना रहस्यमय !
April 17, 2019 Spnews समाचार Comments Off on नयाँ वर्षको दिन माइत आउँछु भनेकी छोरी दिउँसो झुन्डिएको अवस्थामा फेला ! घटना रहस्यमय !
बाँकेको नेपालगञ्जमा करिब ६ महिनाअघि प्रेमविवाह गरेकी एक युवतीको रहस्यमय मृत्यु भएको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१२ भृकुटीनगर निवासी स्वस्तिका लिम्बु आइतबार घरमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी छन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
मुकेश भन्ने आयुष बुढाक्षेत्रीसँग प्रेमविवाह गरेकी लिम्बुको पतिले नै हत्या गरेको राँझामा रहेका माइती पक्षले आरोप लगाएको छ । लिम्बुको शरीरमा कुटपिटको नीलडाम देखिएको दाबी गर्दै माइती पक्षले उनको पतिमाथि कारबाही गर्न प्रहरीसमक्ष आग्रह गरेको छ । उनको हत्या भएको भन्दै माइती पक्षले कारबाहीका जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनका कारण जिल्ला प्रहरीमा तनाव भएको थियो ।
माइती पक्षले पतिले नै लिम्बुको हत्या गरेको भन्दै कारबाहीको माग राखेर प्रदर्शन गरेका थिए । पतिले पटकपटक छोरीलाई कुटपिट गर्ने गरेको मृतकको आमाले बताइन् । नयाँ वर्षको दिन बिहान छोरीले माइत आउँछु भनेको भन्दै उनकी आमाले मध्याह्न १२ बजे पतिले आउन नदिएको फोनबाट जानकारी गराएको बताइन् । लगत्तै छोरीको मोबाइल स्विचअफ भएको उनले जानकारी दिइन् ।
आफूहरू दिउँसो तीन बजे खबर पाएको भन्दै मृतक लिम्बुका फुफाजु दीपक भण्डारीले गएर हेर्दा छोरी झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएको बताए । यता बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले आयुषलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिए । घटनाका विषयमा ससुराली पक्षसँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
यसैबीच चार दिनअघि वेपत्ता भएका बञ्चनपुरका एक युवकको शव फेला परेको छ । कृष्णपुर नगरपालिका–७ का १९ वर्षीय युवक सुविल बडायकको शव लम्वा चद्दरको न्युरा खोलामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।शव खाल्डोमा आधा गाडिएको अवस्थामा भेटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय रैकवार विचुवाका प्रहरी नायब निरीक्षक दिलबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । बडायकको टाउको र शरीर अलग गरिएको अवस्था छ ।
उनको हत्या गरेको आशंकामा एक स्थानीय युवतीसहित दुई जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा कृष्णपुर नगरपालिका–७ की १६ वर्षीया किशोरी शिवानी राना, सोही स्थानका १८ वर्षीय अयोध्या राना र १८ वर्षकै प्रमोद राना रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।कृष्णपुर नगरपालिका–८ मा बस्दै आएका बडायक गत २८ चैतमा स्थानीयको विवाहमा रैकवार विचुवाको कलुवापुर गएका थिए । सोही दिन साँझदेखि सम्पर्कविहीन भएका बडायकको प्रहरीले सोमबार बिहान टि–सर्ट रगतले लतपतिएको अवस्थामा खेतमा फेला पारेको थियो ।
टिसर्ट फेला परेपछि घटनाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीले तालिमप्राप्त कुकुर परिचालन गरेको थियो । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनको खोजीमा प्रहरीले सहयोग नगरेको भन्दै स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । आक्रोशित स्थानीयले इलाका प्रहरीचौकी रैकवार विचुवा घेराउ गर्नका साथै टायर बालेर सडकमा चक्काजाम गरेका थिए ।
आफ्नो सहपाटीको सानो कुरामा पनि रिसाउनु, बहाना बनाउने बानी हुनुले सम्बन्धमा खट्पट आउन थाल्दछ। यदी तपाईको सहकर्मी पनि सानो सानो कुरामा रिसाउने गर्दछन् भने सबै भन्दा पहिले तपाईले त्यस्तो व्यवहार देखाउनुको पछाडिको कारण जान्न आवश्यक छ। त्यसको समाधान निकाल्न सक्नु भएन भने कुनै ज्योतिषका उपाय अप्नाउनु उत्तर रहन्छ।
ज्योतिषका अनुसार गुरु ग्रहको विवाहका कारण ग्रह मानिने गरिन्छ। विवाहको स्थान, जन्म पत्रिकाको सप्तम स्थान हुने गर्दछ। कुण्डलीमा यसको स्थान यदी सूर्य, गुरु, राहु, मंगल, शनि जस्ता ग्रह भएका वा यी स्थानमा यिनको दृष्टी भएमा वैवाहिक जीवन सुखी हुन सक्दैन्।
सप्तम स्थानमा सूर्य हुनु निश्चित सम्बन्ध विच्छेदको कारण हो। त्यही कुण्डलीमा गुरु कमजोर भएमा पनि विवाहसँग सम्बन्धीत समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ।
यी उपाय अप्नाउनुहोस्: शिव लिंगको पुजाः पति पत्नीले आफ्नो झगडाबाट बच्नका लागि सोमबार एकसाथ भगवान् शिवको पुजा आरधना गर्नु भएमा तपाईको सम्बन्धमा सुधार आउन सक्छ।
अबको तीन दिनसम्म मौसम खराब हुने, सतर्क रहन आग्रह
सेना–प्रहरी धेरै चकचक नगर्नुस,भ्रष्टलाई कारवाही गर्छौं, सहयोग गर्नुसः विप्लव